Wiilka Ahmed Shah Massoud oo ku dhowaaqay dagaal ka dhan ah ururka Talibaan | Xaysimo
Home War Wiilka Ahmed Shah Massoud oo ku dhowaaqay dagaal ka dhan ah ururka...
Wiilka Ahmed Shah Massoud oo ku dhowaaqay dagaal ka dhan ah ururka Talibaan
Wiilka hoggaamiyihii ugu caansanaa ee la dagaalamay Taalibaan ayaa sheegay in ciidamadiisa ay diyaar u yihiin inay qaadaan iska caabin wax ku ool ah, balse wuxuu Mareykanka ugu baaqay inay hub iyo rasaas siiyaan maleeshiyadiisa.
Massoud ayaa sheegay in Talibaan ay halis ku yihiin wax ka baxsan xuduudaha Afghanistan.
“Inta ay xukumeyso Talibaan, Afghanistan waxay shaki la’aan noqon doontaa saldhigga argagixisada Islaamiyiinta xagjirka ah; shirqoolo ka dhan ah dimoqraadiyadda ayaa mar kale halkan lagu diyaarin doonaa.”
Tan iyo markii ay xukunka la wareegeen, Talibaan ayaa soo bandhigayey hub, rasaas iyo qalab baaxad leh oo ay ka qabsadeen ciidamada Afghanistan – oo badankood uu u qeybiyey Mareykanka.
Massoud ayaa sheegay in 20 sano kadib, Mareykanka iyo Afghanistan ay wadaagaan “mabaadi’ iyo halgan,” wuxuuna ka codsaday Washington inay taageerto “qadiyadda xoriyadda” intii ay Afgaaniyiinta uga tagi lahaayeen Talibaan.